ကိုလိုနီယားနာနှင့် အဆောင်အယောင်နိုင်ငံရေး | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၁၁ သာကီနွယ်ဇာတ်ထုပ်
A Letter from an 86 year old Netizen »
ကိုလိုနီယားနာနှင့် အဆောင်အယောင်နိုင်ငံရေး	29Apr11
ဒီနေ့ရေးတာကတော့ အညွန့်ခူးစားပီး လူဘုန်းကြီးလုပ်တာချင်းအတူတူ တချို့က ဟန်ကောင်းတယ်၊ လူချစ်အောင် လုပ်ပြတတ်ရုံမက ရောင်းတောင်စားတတ်သေးတယ်ဆိုတာပါ။ ဒီခေတ် ဒီတိုင်းသူ ဒီပြည်သားတွေကတော့ စစ်ပီးစလောက်ကလို ဘုရင်ရောဂါသိပ်မကျန်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ အထူးအဆန်းပွဲကြည့်ပရိသတ်၊ မင်္ဂလာဆောင်ဝါသနာရှင်တွေကို မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ယူမယ့် တိုရီအာဏာရများ၊ ဈေးသည်ဟိုတယ်ထမင်းသည်များ၊ ခေတ်ကျပ်မှာ အခွန်အတုပ်လျော့မှာကြောင့်ကြနေရတဲ့ အငြိမ့်စားလူတန်းစား ၃ ဌာန အကျိုးတူ ဖက်ရှင်ရှိုးလို့သာ မှတ်ကြပါ။ မီဒီယာများ အတွက်တော့ နောက်ထပ်ရွှေမင်းသားမင်းသမီးမျိုးဆက်တဆက် ထွက်လာပြန်ပေါ့။ ဘယ်တော့ ဘာကြားရမယ်သာမသိပါ။ ဆရာတက်တိုးရေးဘူးတဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဆောင်တဲ့သူတွေ မြန်မြန်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာလေးပဲ မှတ်မိနေပါတယ်။ ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက်ကြီးကတော့ သူ့နေ့စဉ်မှတ်တွေမှာ ဘယ်ဝန်ထောက်သမီး လီးတို့ပွဲသွားသည်လို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရေးသွားတာသာ မြင်ကြည့်ပါတော့။ မြန်မာတွေမှာလဲ ခုထိ ဇာတိမာန်တက်စရာက ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသန့်သာရှိသေးတာဆိုတော့ အစဉ်အဆက် ပညာရေး နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ မော်ကြည့်လာရတဲ့ အနောက်တိုင်းက ရေပေါ်ဆီများကို မီဒီယာကျေးဇူးနဲ့ အထင်ကြီးစရာဖြစ်တုန်းပါပဲ။ အနောက်ကို ခါးခါးသီးသီးမုန်းပြရတာကလဲ မသိစိတ်က ကြိတ်ပီးကြောက်တာ၊ ကြည်ညိုနေတာကို ပုံစံလွှဲဖော်ပြနေတဲ့ မူလကျီတမျိုးပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီအင်္ဂလိပ်ဂလိုဘယ်ဓားပြမင်းမျိုးဟာ ဗမာဓမြဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့သဟာယအရင်းအချာတွေပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဂျီစီဘီအေဦးချစ်လှိုင်ကြီးအကြောင်း လိုက်ဖတ်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘိလပ်မှာ မင်းမျိုးတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းလာပီး ဗမာပြည်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ဒိုင်အာခီသပိတ်မှောက် ဝံသာနုခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာ၊ ဒီကနေ လူမျိုးခြားထောက်ပံ့မှု မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်စားနိုင်ငံရေးထဲရောက်ပီး စစ်ပီးစမှာ အင်္ဂလိပ်ဆွဲခန့်တဲ့ အလိုတော်ရိလွှတ်တော်အကြီးအကဲထိဖြစ်၊ ဒိနောက် ခေတ်ကုန်နေရာကနေ ဖဆပလသမတလောင်း ကိုလိုနီတရားသူကြီး ဆာဘဦးကို ဝင်ယှဉ်ဘို့ အတိုက်အခံဘက်က သမတလောင်းဝင်ပြိုင်ပေမယ့် ကံမပါတော့ ဂျီစီဘီအေသမတ မြန်မာပြည်ရဲ့ သရဖူမဆောင်းတဲ့ ဘုရင်ဟောင်းကြီးဟာ ဦးနုခိုင်းဖတ်သမတဘဝကို မရောက်လိုက်ရှာပါဘူး။ ဒါကတော့ မွန်ဗမာပညာတတ် ရေပေါ်ဆီနိုင်ငံရေးရဲ့ ပြယုဂ်တခုပါ။ အခုခေတ် ဗမာခေါင်းဆောင်များကော။ အနောက်တိုင်းကမွေးတဲ့ ဆုတော်ယူ ပရောဂျက်မျှော် နိုင်ငံရေးဆပ်ကပ်သမားလောက်နဲ့ပဲ ပီးကြတော့မှာလား။ (၁)
”ဂျူဘလီသဘင်ပွဲထိုင်တွင် မောင်မယ်စုံညီနွှဲနိုင်လျှင် ” (ခေတ်ဟောင်းတေးတပုဒ်)
အင်္ဂလိပ်ဘုရင်မမြေး မင်္ဂလာဆောင်ကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်ကြည့်နေကြသည့်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စ ဇာချဲ့လွန်းသည်ဟု မျက်မွေးစူးစရာပင် ဖြစ်တော့သည်။ တချို့ကလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကျွန်လုပ်သွေးစုပ်သွားသည့် ဘုရင်အမျိုးအနွယ်တွေကို ဤမျှ အလွမ်းပိုမနေသင့်ဟု စောကြောကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းဆိုသည်က လူစိတ်ဝင်စားအာရုံစိုက်ခံရသူများသတင်းမှာ သတင်းအရ တန်ဖိုးတမျိုးတော့ရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီတခေါက်ပြန်လွတ်လာသည်ကအစ အခုထိ သူသွားလာလှုပ်ရှားဝတ်ဆင်သည်ကအစ သတင်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။
ဤဝေးလံမြေခြား မြန်မာပြည်နှင့်လည်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအနှောင်အဖွဲ့မရှိသည့်တိုင်းပြည်မှ မင်္ဂလာဆောင်ကို ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီး မဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားကြသည်ကတော့ ကွယ်လွန်သူ သတို့သားမိခင် လေဒီဒိုင်ယာနာကြောင့်ဟု ထင်မိသည်။ လေဒီဒိုင်ယာနာမှာ အဝတ်အစားဖက်ရှင်ကျ ချစ်စရာပီယရှိရုံသာမက တခြားမင်းသမီးများ မင်းသားမျောက်သားတော်များနှင့်မတူ လူမှုရေးအလုပ်ကို ဇောက်ချလုပ်သွားသည့်အတွက် အများမေတ္တာကို ခုထိရနေသူဖြစ်သည်။ ဖြတ်ခနဲရပ်သွားသည့် ဘဝအဆုံးသတ်ကြောင့် ကျန်ရစ်သူ သား နှစ်ပါးကို ဒိုင်ယာနာချစ်သူများက အသနားပိုကြသည်မှာ ခုထက်တိုင်ဖြစ်သည်။
ဥရောပ အာရှမှ ထီးရှင်နန်းရှင်များအကြား ဗြိတိသျှထီးနန်းကိုမှ မြန်မာတို့ စိတ်ဝင်စားသည်က ကိုလိုနီအမွေ သံယောဇဉ်နှင့် လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ထင်ပါသည်။ မည်မျှပင် မျိုးချစ်ပါသည်ဟု ကြွေးကြော်သူများပင် ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော် ဘစ်ဘင်နာရီစင်နှင့် ပါလီမန်နှင့် လန်ဒန်ရဲတိုက်က သရဖူတလုံးတွင် ငမောက်ပတ္တမြားရှိနိုင်ကြောင်းစသည့် ဘိလပ်အကြောင်းကို အမျှင်တန်းအောင် ပြောနိုင်ပါသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းပညာရေးကို ရလိုက်သည့် အသက် ၆၀ အထက် ပင်စင်စား ရိက္ခာတော်နည်းနည်းနဲ့များများရမျိုးဆက်တချို့ဖြစ်ပါသည်။
အဓိကကတော့ အများပြည်သူစောင့်မျှော်ကြည့်နိုင်သည့် ဘုရားကျောင်းနှင့် နန်းတော်ကြား ဘာဂီရထားနှင့်သွားသည့်အခမ်းအနား၊ နန်းတော်ဝရံတာမှ လူထုကိုထွက်နှုတ်ဆက်သည့်ကဏ္ဍများကြောင့် ကမ္ဘာ့သတင်းလောကတွင် ဟစ်ဖြစ်နေပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဘုရင်ခေတ်က နေပြည်တော်ခေတ်ထိ ရေမြေ့ရှင်များမင်္ဂလာဆောင်တွင် လူထုကဏ္ဍက စတုဒိသာကျွေးသည်လောက်သာ ရှိခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်၍ ဤသို့ ထိပ်ဆုံးကလူများကို ကျန်သူများက စောင့်ကြိုအားပေးသည့် ဥရောပထုံးစံမှာ မြန်မာပြည်လို အာဏာရှင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမျိုးတွင် မကြားဘူးအောင် ဖြစ်နေရသည်။
ထိုမှ မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်မင်းစိုးရာဇာတို့ ဆက်စပ်မှုကို ဆက်ရေးရလျှင် နှမတော် ဝိတိုရိယထံ ရွှေထွေးခံလက်ဆောင်ပို့သည်ကို ပန်းအိုးလက်ခံရရှိ၍ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာပြန်သဖြင့် “နှမတော်လဲ နန်းနဲ့ဝေးတော့ နန်းထုံးစံတွေမသိတော့ဘူး”ဟု မင်းတုန်းမင်းကြီးက မိန့်သည်ဟု ရီစရာပြောတတ်သည့် ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်)ကို သတိရသည်။ သူတို့ဆရာ ရွှေပြည်ဦးဘတင်ဆီက ကြားဘူးတာလား၊ မန္တလေးနားက ရှေးလူကြီးတွေပြောတတ်သည့် နန်းတွင်းပုံပြင်ပဲလားမသိပါ။ သေချာသည်က သီပေါမင်းတို့ ဘိလပ်အလည်သွားခရီးစဉ် တိုင်တားမင်းကြီး၊ ရနောင်မောင်တုတ်တို့ဝင်နှောင့်၍ ပျက်သွားခဲ့ခြင်းပင်။ တိုင်တားအုပ်စုက “ အရှင် ၂ ပါး မရှိတုန်း နေပြည်တော်ကြီးကို မြင်ကွန်းတို့ ညောင်ရမ်းတို့က အလှကြည့်နေမှာ မှုတ်ဘူးဘုရာ့၊ ရွှေနန်းရှင်သည် သောင်ပြင်မှာလွှတ်သောခွေးကဲ့သို့ ဘိလပ်မှာ ငတ်သေရမည်”ဟု နားသွင်းသောကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးတို့ ဘိလပ်ပြန်အုပ်စုအကြံပျက်ခဲ့ရဘူးသည်။
ထို့နောက် ကျွန်ခေတ်တွင် လန်ဒန်တွင် ဝိတိုရိယဘုရင်မနှင့် လ္ဘက်ရည်ပွဲအတူသုံးဆောင်ဘူးသည့် မင်းကြီးကတော်မမြမေ၊ မြန်မာပြည်သိမ်းဘုရင်မ၏ မြေးတော်များနှင့် ကျောင်းနေဘက် ဝံသာနုခေါင်းဆောင် ဂျီစီဘီအေအဖွဲ့ချုပ်၏ ပထမဆုံး သမတဘွဲ့ခံဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးချစ်လှိုင်စသည့် ကျွန်ကြီးများ၏ ဘိလပ်မင်းပါးစိုးခွင်ဝင်နိုင်မှုက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မော်ကွန်းထိုးစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးချစ်လှိုင်က မော်လမြိုင်မှ ကျွန်းသစ်လုံးများမှာပေးကာ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်တွင် သစ်နန်းတော်လေးဆောက်ပေးဘူးသည်ဟု သူ့နှမ အမတ်ဒေါ်နှင်းမြအကြောင်း စောမုံညင်းရေးစဉ်က ဖတ်ဖူးသည်။
“အောင်ဆုသြဘာ မင်္ဂလာနှင့် ဆယ်ဖြာလက်မြှောက် ကျွန်ုပ်လျှောက်ပိမ့်” အစချီကာ ကျွန်ခေတ်က ကျောင်းများတွင် နေ့စဉ်ရွတ်ရသော ဘုရင်အလေးပြုမေတ္တာပို့လင်္ကာမှာ God Save the King သီချင်း မြန်မာပြန်ပင်ဖြစ်ပီး အင်ပါယာစွဲကော်မတီခေါ် မြန်မာပြည်သူများအကြား ကျွန်သွေးကျွန်စိတ်များတိုးပွားရေးအတွက် ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းတည်ထောင်သည့် စိတ်ဓာတ်ဝါဒဖြန့်အဖွဲ့က စပ်ဆိုသည်။ ဘိုင်စကုပ်ရုံတွင် ဘုရင် ဘုရင်မပုံပြကာ အရိုအသေပေးခိုင်းတိုင်း မြန်မာတွေ နောက်တတ်သည့် ကင်းဂျွတ်နဲ့ ကင်းမဲကြီးမှာ အိမ်ရှေ့စံ ဝေလာမင်းသားမင်းသမီးဘဝ ၁၉၀၆ က မြန်မာပြည်အလည်လာကာ မန္တလေးနန်းတော်ဟောင်းကို ကြည့်သွားဘူးသည့် ဂျော့နှင့်မေရီ စုံတွဲဖြစ်သည်။ သူတို့ ၁၉၁၁ ဟို အနှစ်တရာက ဒေလီမြို့တော်သစ်တွင် အိန္ဒိယလက်နက်နိုင်ငံဘိသိက်ခံရာတွင်လည်း မြန်မာပြည်က စော်ဘွား-မဟာဒေဝီတချို့၊ ပုဂံဝန်ထောက်ဦးတင်နှင့် ဦးဘိုးသာစသည့် ဒုတိယဘုရင်ခံ၏ မင်းတိုင်ပင်အမတ်ကြီးများတက်ရောက်အခစားဝင်ရပါသည်။ သူတို့လာတုန်း ရတနာဂီရိစံသီပေါဘုရင်ဟောင်းက ထောက်ပံ့ကြေးပိုရအောင် စာတင်ခဲ့သော်လည်း လျစ်လျူပြုခံရသည်။
ထို့နောက် တခုလပ်နှင့် လက်ဆက်၍ နန်းစွန့်ရသည့် ဝေလမင်းသားအက်ဒွပ် ၁၉၂၂ လာစဉ်က သပိတ်မှောက်ဖို့ လှုံ့ဆော်သည့် ဦးချစ်လှိုင်၊ ဦးစိန်းစသည့် နိုင်ငံရေးသမား သတင်းစာသမားများကို နယ်စွန်နယ်ဖျားပို့ နယ်နှင်ခဲ့သည်သာမက မင်းသားပြန်လျှင် လွမ်းကျန်ရစ်မည့် ရန်ကုန်သူ လူ့မလိုင်သမီးများ ရတနာဒီပံဆေးဖယောင်းတိုင်ထွန်းသင့်ကြောင်း စာရေးသည့် သတင်းထောက် ဦးပုကလေးကို ညစ်ညမ်းသည်ဟု ဖမ်းခဲ့ဘူးသည်။ ဝေလမင်းသား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အသစ်ကို လာကြည့်စဉ်က ရွှေနားတော်သွင်းရန် စပ်သည့် ယူနီဗာစီတီဆရာပွား၏ ဝေလမင်းသားဧချင်းဟုလည်း ကျန်ခဲ့သည်။
သူနန်းစွန့်ပီး အသစ်တက်သည့် ညီတော် ဆဌမဂျော့၏ ၁၉၃၇ နန်းတက်ပွဲသို့ မြန်မာနန်းရင်းဝန် ဒေါက်တာဗမော်၊ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်လှိုင်၊ သူဌေးဆာဦးသွင်တို့ တက်ကြသည်။ လန်ဒန်ရောက် မင်းသုဝဏ်စသည့် မြန်မာပညာသင်များကို နန်းရင်းဝန်ကြီးက တွေ့ဆုံအားပေးသည်။
ဂျော့၏ သမီးတော်ကြီး ဝေလမင်းသမီး အဲလဇ္ဇဘက်သ် ၏ ၁၉၄၇ မင်္ဂလာဆောင်အတွက် မိုးကုတ်မြို့က ပတ္တမြားလည်ဆွဲဆက်သပီး မြန်မာသမ္မတ စဝ်ရွှေသိုက်-မဟာဒေဝီနှင့် သမီးတော် စဝ်စန္ဒာတို့ တက်ရောက်ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးမရသေးသော်လည်း ရတော့မည်ဖြစ်၍ တိုင်းပြည်ချင်း ဆက်ဆံရေးတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့်ပွဲဖြစ်၍ သမ္မတအဖြစ် တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးကို ကြိုတင်လျာထား စေလွှတ်ရသည်။ စဝ်စန္ဒာမှာ ဘိလပ်တွင် ကျောင်းဆက်တက်ရန် တပါတည်းလိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ( ကိန်းဘရစ်ခ်ျမှ မနုဿဗေဒမဟာဘွဲ့ယူခဲ့သည်) လက်ထပ်ပွဲတွင် မဟာဒေဝီနှင့် သမီးတော်တို့ မြန်မာမင်းသမီးဝတ်စုံ ထိုင်မသိမ်း ဗလာထမီနှင့် ပွဲတက်ကြသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် တပ်မတော်အတွက် လွန်စွာကျေးဇူးကြီးသည့် ဗြိတိသျှရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်း လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်အော့ဖ်ဘားမားမှာ လက်ရှိဘုရင်မ အဲလဇ္ဇဘက်သ်၏မျောက်သားတော် ဖိလစ်မင်းသား၏ ဦးလေးတော်ကာ မင်းဆွေမင်းမျိုးများအပေါ် အင်မတန်သြဇာကြီးသူဖြစ်သည်။ သူ့မသာတော်တွင် မြန်မာပြည်က ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင် (နောင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ယခု တစည) နှင့် အခြားဗိုလ်မှူးကြီးများ ဗီအိုင်ပီအနေနှင့် အလောင်းတင်ခေါင်းနောက်ကလိုက်ရသည်၊ ဦးနုခေတ်က ပေးသည့် မြန်မာပြည်၏ အမြင့်ဆုံး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မဘွဲ့တံဆိပ်နှင့် ရွှေစလွယ်ကို မသာချသည့်အခါ ရှေ့ဆုံးက သယ်သွားသည်၊ ကစ်ပလင်၏ မန္တလေးသို့သွားရာလမ်း ကဗျာကို ဘင်ခရာနှင့်တီးရန် လိုက်ရှာရာ ရှာမတွေ့၍ မတီးလိုက်ရစသည့် အလွမ်းသယ်စရာများက ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။
စစ်ပီးခေတ်တွင် လူပြောများသည့် ဘုရင်မညီမတော် မာဂရက်မင်းသမီးနှင့် ရန်ကုန်ပေါက်လေတပ်ဗိုလ်တခုလပ် ပီတာတောင်ဆင်တို့၏ မပြေလည်ခဲ့သည့် အချစ်ရေးကလည်း မြန်မာဆယ်ကျော်သက် ခေတ်ဆန်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင် လက်ဖက်ရည်နှင့် မြည်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာပြည် မကြာခဏအလည်လာသည့် ဘုရင်မညီမဝမ်းကွဲ အလက်ဇန္ဒြရားမင်းသမီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းတို့၏ ခင်မင်သောဆက်ဆံမှုကလည်း စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးဘာအကူးအသန်းရှိခဲ့သည်ကို ပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါသည်။ တရုတ် အိန္ဒိယဘဏ်တွေကို အလကားဝင်သိမ်းခဲ့သော်လည်း ဘီအိုစီကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းစဉ်က လျော်ကြေးနင့်နေအောင် ပေးလိုက်ရသည်။ မြန်မာလိုဝတ်သော အလက်ဇန္ဒြရားကို တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော် ဘိလပ်ပြန် ကေတီခင်မေသန်းက သရက်သီးနှင့် ထမင်းကျွေးဘူးသည်။
နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဘိလပ်ကို မြင်းလောင်းဆေးစစ်လာလျှင် ဒေါ်ခင်မေသန်း ဟားရော့ကုန်တိုက်ကို ဈေးဝယ်လာလျှင် နေစရာ ဝင်ဘယ်လ်ဒန်တွင် အိမ်တလုံးဝယ်ထားရသည်အထိ
ဆက်ဆံရေးက ခိုင်မာခဲ့သည်။ မဟုတ်က ဟိုတယ်ခတွေနင့်နေအောင် တိုင်းပြည်ပိုက်ဆံထဲက ကုန်လိမ့်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆေးစစ်လာလျှင် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများကိုဆုတော်လာဘ်တော်
ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ ပေးသနားသည်အထိ သဒ္ဓါတတ်ကြောင်း ကြားဘူးကြပေမည်။ လန်ဒန်သံရုံးအဖို့လည်း လူကြီးခရီးစဉ်ဘတ်ဂျက်ပြဿနာက တော်တော်ခေါင်းကိုက်ခဲ့ကြောင်း
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် အကအဖွဲ့နှင့် ဘိလပ်လာစဉ် ကြုံခဲ့ရသည်များကို လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံတွင် ပြောကြားချက်များတွင် နားဆင်နိုင်ပါသည်။ ယခု အရပ်သားဝန်ကြီးများကို ဥရောပသမဂ္ဂက ဗီဆာပေးမည်ဆို၍ ဆေးစစ်ခံအခွင့်ထူးများကို ဂဒီးဂဒီးလာသုံးကြအုံးမည်ကို လန်ဒန်၊ ပါရီသံရုံးများ ရင်ပူနေလောက်တော့မည်။
ထို့နောက် ဒိုင်ယာနာကေဟု မြန်မာလုံမငယ်တို့အကြား တခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကို လူထုဒေါ်အမာက “ရွှေမင်းသမီးလေး”ရောဂါဟု စာဖွဲ့ခဲ့ဘူးသည်။ အတည်မယူပဲ မြာပွေနေသည့် ဥပရာဇ်မင်းသား ချားလ်စ်ကို အရင်းရှင်သတင်းစာပညာနှင့် ဝိုင်းလှော်ပေးလိုက်ကြ၍ ယူဖြစ်သွားသည်ဟု ဒေါ်အမာကဆိုသည်။ ထို့နောက် ဒိုင်ယာနာသည် မော်တော်ကားမှောက်၍ သေပီးနှစ်အတော်ကြာထိ မြန်မာတက်ဘလွိုက်ခေါ် ပြူးတူးပြဲတဲ စာစောင်များကို အနှစ် ၂၀ ခန့်လုပ်ကျွေးသွားရှာသည်။
စီးပွားရေးကျသည့်အထဲ စစ်စရိတ်ထောင်းနေသည့် ဗြိတိန်တွင် ပညာသင်စရိတ် ကျန်းမာရေး လူမှုရေးအထွေထွေထောက်ပံ့မှုများကို လူမုန်းခံဖြတ်တောက် အလုပ်ဖြုတ်နေသည့် လက်ရှိ တိုရီညွန့်ပေါင်းအစိုးရက ဝှဲချီးကျင်းပသည့် တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲမှ ခရီးသွားဝင်ငွေ မီဒီယာကြေး အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းခများဖြင့် စရိတ်ကျေပါစေ အမြတ်ထွက်ပါစေဟုသာ အခွန်ထမ်းတဦးအနေနှင့် ဆုတောင်းမိပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်လည်း “ခရစ္စမတ်သစ်ပင်”တို့ သရဲကားမင်္ဂလာဆောင်၊ သဘင်သယ် ၂ ယောက်၏ စပွန်ဆာမင်္ဂလာဆောင်မျိုးထက် ပိုတင့်တယ်အောင် ဆောင်တတ်သည့် မင်္ဂလာဆောင်ကောင်းလေးတွေ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါစေ၊ သဒ္ဓါသဖြင့်ဖွဲ့သော လက်ဖွဲ့မျိုးကိုသာ မြင်တတ်ကြပါစေ၊ မင်္ဂလာအဝတ်တွင်လည်း ကလက်တက်တက် ခေတ်ပေါ်မြန်မာဝတ်စုံပျက်များကို ရှောင်ပီး ဗြိတိသျှတော်ဝင်ပွဲတက်စုံများကဲ့သို့ ထုံးမီစံကျ အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဝတ်တတ်စားတတ်ကြပါစေဟုသာ မျှော်လင့်မိပါသည်။
Filed under: history, nationalism, recycled	|5Comments	5 Responses to “ကိုလိုနီယားနာနှင့် အဆောင်အယောင်နိုင်ငံရေး”	Feed for this Entry
phoethu taw on April 30, 2011 said:
စုံပါ့ဗျာ…။ ဂေါ့ဆေ့ဗ်သည်ကွင်း..း))
မောင်ဖိုးမာ on April 30, 2011 said:
ရတနာဒီပံဆေးဖယောင်းတိုင်ကတော့ဖတ်ဖူးပါတယ်.. မကြားဖူုးတဲ့ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက်ကြီးရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖတ်ပီး အော်ရယ်မိတယ်ဟီး။
kohlahan on May 1, 2011 said:
ကျွန်တော်အမှတ်မှား နေသလားလို့ထင်မိလို မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မောင့်ဘတ်တန်ဟာ ဘုရင်မကြီး ဘဒွေးတော်ဟုထင်ပါသည်။ မောင့်ဘတ်တန်ဟာ ၀ိတိုရီယားဘုရင်မကြီးကတိုက်ရိုက် ဆင်းသက်သူမို့ ဂျာမဏီသွေး မကင်းလို့ပါလို့သိထားပါသည်။ မြောက်သားတော် ဖိလစ်မင်းသားဟာ ဂရိတ်သွေးပါတယ်လို့လည်း မှတ်သားဘူးပါသည်။ ကျွန်တော်စာအုပ်ပြန်ရှာ မတွေ့ဖြစ်နေပါသည်။ သန်းခေါင်ယံလွတ်လပ်ရေးစာအုပ်(အိနိယလွတ်လပ်ရေး) မှာတော့ မောင့်ဘတ်တန်ကို ဘုရင့်ညီတော်လို သုံးထားပါသည်။ ကျွန်တော်အမှတ်မှား သည်ဟု ထင်မိရွေ့ မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
bobolansin on May 1, 2011 said:
His maternal grandparents were Ludwig IV, Grand Duke of Hesse and by Rhine and Princess Alice of the United Kingdom, who wasadaughter of Queen Victoria and Albert, Prince Consort…..His siblings were Princess Alice of Greece and Denmark (mother of Prince Philip, Duke of Edinburgh), Queen Louise of Sweden, and George Mountbatten, 2nd Marquess of Milford Haven.
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Mountbatten,_1st_Earl_Mountbatten_of_Burma Yes, He’sacousin to George VI of UK and also an uncle of Prince Philip.
kohlahan on May 2, 2011 said:
ကျွန်တော်သမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်လည်း လေ့လာပါတယ်။ ဘာသာစကားမတတ်တဲ့အတွက် မြန်မာစာကိုဘဲအားထား လေ့လာနေရပါသည်။ ကျိုင်းတုံအနွယ်တော်များအကြောင်းကိုလည်း သွားကြည်လိုက်ပါတယ်။ ရှစ်ဆောင်ပဏား သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ စပ်နန်းတစ်ထီလာတို့၊ စပ်နန်းဝန်တစ်တို့ ညီအမတွေးအကြောင်းလည်း စိတ်ဝင်းစားပါတယ်။ ပင်လုံစစ်တမ်းနဲ့ နေ၀င်ဘုရင်များ စာအုပ်မှာ ပါသလောက်ဘဲ သိထားပါတယ်။ ပင်လုံစာချုပ်သမိုင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းကို လေ့လာခြင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Reply	« ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၁၁ သာကီနွယ်ဇာတ်ထုပ်